အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – မည်ကဲ့သုို့ လုပ်လုိုက်သည်မသိ | MoeMaKa Burmese News & Media
အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – မည်ကဲ့သုို့ လုပ်လုိုက်သည်မသိ
စကားနည်းပြီး အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ ပြုံးသယောင် မျက်နှာပုိုင်ရှင် လူငယ်ကျောင်းသား တစ်ယောက်အဖြစ် သူ့ကုို သိခဲ့တယ်။ လယ်သမား မိဘမျိုးရုိုးမှ ဆင်းသက်လာသူ လူငယ်လေးဟာ ဆယ်တန်းကုို နှစ်ချင်းပေါက် အောင်ခဲ့တယ်။ သူဟာ တက္ကသုိုလ်ကျောင်းပြီးတာနဲ့ ဗုိုလ်သင်တန်း တက်ခွင့် ရသွားခဲ့တယ်။ စစ်ဗုိုလ်ဖြစ်ပြီးနောက် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ခွင့်နဲ့ မိဘရပ်ထံ ပြန်ပြီး တစ်ပတ်လောက် ဒုလ္လဘရဟန်း ခံခဲ့တယ်။
ခေတ္တ ရဟန်းဝတ်ခဲ့စဉ်မှာ တက္ကသုိုလ်ကျောင်းပြီးကတည်းက ရဟန်းဘဝ ခံယူသွားခဲ့သူ သူ့ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းဟောင်းနဲ့ ပြန်ဆုံခဲ့တယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းကုို သူ ပြန်ပြောပြခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေထဲမှာ ဘယ်လုိုတာဝန်တွေကို ဘယ်လုိုပုံစံနဲ့ ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတယ် စတဲ့ စစ်တပ်အတွေ့အကြုံတွေလည်း ပါဝင်တယ်။
ကျေးလတ်ဒေသတွေကုို နယ်မြေ ရှင်းလင်းရေးအနေနဲ့ စစ်ကြောင်းထွက်ရတဲ့ အခါမှာ အဖေအရွယ် ဘကြီးအရွယ် အဖုိုးအရွယ် ဒေသခံ ရပ်ရွာလူကြီးတွေကုို သူပုန် သုို့မဟုတ် သူပုန်ဘက် ပါသူ ဆုိုပြီး ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် ကုိုယ်တုိုင် ရက်ရက်စက်စက် သတ်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တွေလည်း ပါဝင်တယ်။
ဒီလုို ရက်စက်မှုမျိုးတွေဟာ လက်နက်ကုိုင် ပဋိပက္ခရှိတဲ့ တုိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ မထူးဆန်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေပါ။ စစ်တပ်က ကျူးလွန် တဲ့ မဒိမ်းကျင့် လူသတ် ပေါ်တာဆွဲ ပစ္စည်းလု ရွာမီးရှို့ စတဲ့ လူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ လူ့အခွင့်အရေးဆုိုတဲ့ စကားလုံး မြန်မာနုိုင်ငံမှာ မတွင်ကျယ်ခင် မဆလ တပါတီ အာဏာရှင် ခေတ်ကတည်းက ရှိခဲ့တာပါ။
အဆုိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ တပ်မတော်မှာ အလယ်အလတ်အဆင့် အရာရှိတစ်ယောက်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲပါ။ ယခုတော့ သူဟာ စစ် တပ်အတွက် မြေယာသိမ်းဆည်းရေးနဲ့ ပက်သတ်တဲ့ ဌာနတစ်ခုမှာ ကြီးကြပ် တာဝန်ယူရတယ်လို့ ဆုိုတယ်။ သူ ဘေးပေါက်ရတဲ့ လစဉ် ဝင် ငွေက သူ့လစာကုို ၁၅ နဲ့ မြှောက်လုိုက်ရင် ရတဲ့ ရလဒ်နဲ့ ညီမျှပါတယ်။
ယခုအချိန်ဟာ အိမ်မဲ့ မြေမဲ့ လယ်ယာမဲ့ ဘဝ ရောက်နေကြရတဲ့ ခြံသမား တောင်သူ လယ်သမား ဆင်းရဲသား ပြည်သူပြည်သားများရဲ့ သောကမျက်ရည်နဲ့ စစ်တပ်အရာရှိများနဲ့ ခရုိုနီသူဌေးများ စီးပွါးရေး သောင်းကျန်းချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
သစ် ရေနံ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ အဖုိုးတန် တွင်းထွက် စသည် စသည် အထူး အခွင့်အရေးတွေ အကြီးစား စီးပွါးရေး အကျိုးအမြတ်တွေကုို ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုပင် ခံစားခွင့်တွေ ရရှိနေကြပေမယ့် ပြည်သူအများစုရဲ့ လူနေမှုဘဝကတော့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလျှက်ပါ။
ပြည်သူအများစု လျှပ်စစ်မီး မသုံးနုိုင်ကြပေမယ့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားတွေကုို ပြည်ပနုိုင်ငံတွေကုို ရောင်းမယ့် အကောင်အထည် ဖေါ်ဆဲ အကောင်အထည် ဖေါ်လတ္တံ့ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတွေနဲ့ လွတ်တဲ့ မြစ်တွေ မြန်မာနုိုင်ငံမှာ မကျန်သလောက်ပဲ ထင်ပါတယ်။ ဘယ်လုို စာချုပ်တွေကို ဘယ်လုို အပေးအယူတွေနဲ့ ချုပ်ဆုိုခဲ့တယ် ဆုိုတာကုို ပြည်သူအများ သိခွင့် မရကြပေမယ့် နစ်နာဆုံးရှုံး ပေးဆပ်နေရသူတွေ ကတော့ ပြည်သူပါ။
ပြည်သူသာ အမိ ပြည်သူသာ အဖ လုို့ ပြောခဲ့တဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗုိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ စကားနဲ့အညီ လက်တွေ့မှာ စစ်တပ်ဟာ ပြည်သူပြည်သားများကုို အမိ အဖလုို သဘောထားပြီး ကြင်နာသနား ထောက်တားငဲ့ညှာမှု ရှိပါရဲ့လား???
မိဘပြည်သူများ ခင်ဗျာ လို့ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ဆုိုလေ့ရှိတဲ့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ အမှန်တကယ် ကုိုက်ညီပါရဲ့လား???
မြန်မာနုိုင်ငံမှ စစ်အရာရှိများဟာ ဘာကြောင့် ဒီလောက်တောင် ဝိသမလောဘတွေ ထူပြောသွားရပါသလဲ??? ဘာကြောင့် ဒီလောက်တောင် တစ်နုိုင်ငံတည်းသား တုိုင်းရင်းသား ပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်း အပေါ်မှာ စာနာမှု ကင်းမဲ့စွာ ယုတ်မာ ရက်စက် ကရုဏာ ကင်းမဲ့သွားရ ပါသလဲ???
မြန်မာနုိုင်ငံလို ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့ သီရိလင်္ကာနဲ့ ထုိုင်းနုိုင်ငံတွေမှာ ၃ နှစ် ၄ နှစ်လောက် နေထုိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ထုိုနုိုင်ငံတွေမှာ စစ်တပ်နဲ့ ပြည်သူအကြား နွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံရေးကုို သတိပြုမိခဲ့ပါတယ်။
သိရသလောက် အနောက်နုိုင်ငံတွေမှာ စစ်သည်တွေကုို ဘာသာရေးအသိအမြင် လူ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ ကုိုယ်ကျင့်တရားတွေကုို သင်ကြားပေးရတဲ့ Military Chaplain ဆုိုတဲ့ ဘာသာရေး ဆရာတွေကုို စစ်တပ်မှာ ခန့်အပ် တာဝန်ပေးထားပါတယ်။ Chaplain ဆုိုတဲ့ စကားလုံးက ခရစ်ယာန်ဘာသာကနေ ဆင်းသက်လာခဲ့ပေမယ့် ယခုတော့ စစ်တပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ခရစ်ယာန် ဟိန္ဒူ အစ္စလမ် ဂျူး စတဲ့ ဘာသာရေးဆရာ အားလုံးကုို ကုိုယ်စားပြုတဲ့ စကားလုံး ဖြစ်နေပါပြီ။
အမေရိကန်စစ်တပ်မှာ Military Chaplain ထားရှိရေးကုို ၁၇၉၁ ခုနှစ်က စပြီး အမေရိကန် ကွန်ကရက်က ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ မျက်မှောက်ခေတ် အမေရိကန်စစ်တပ်မှာ Military Chaplain သုံးထောင်နီးပါးလောက် ရှိပါတယ်။ Armed Forces Chaplains Board ဆုိုတဲ့ စစ်တပ် ချပလိန် ဘုတ်အဖွဲ့ က ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကုို ဘာသာရေး လူ့ကျင့်ဝတ် ကုိုယ်ကျင့်တရားဆုိုင်ရာ ကိစ္စတွေနဲ့ ဘာသာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိတဲ့ မူဝါဒ ချမှတ်ရေး ကိစ္စတွေမှာ အကြံပေးရပါတယ်။ အမေရိကန် ကြည်းတပ် ရေတပ် လေတပ် တစ်ခုစီမှာ ဘာသာရေးဆုိုင်ရာ အကြီးအကဲ တစ်ဦးစီနဲ့ လက်ထောက်အကြီးအကဲ တစ်ဦးစီ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားပါတယ်။
မြန်မာ့တပ်မတော်ကုို ပြည်သူက အားကုိုး ယုံကြည် လေးစားထုိုက်တဲ့ ပြည်သူချစ်တဲ့ ပြည်သူ့တပ်မတော်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းမယ်ဆုိုရင် စစ်တက္ကသုိုလ် စစ်သင်တန်းကျောင်းများနဲ့ တုိုင်း တပ်မ တပ်ရင်း တပ်ဖွဲ့တွေမှာ Military Chaplain များကုို ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရန် သင့် မသင့် ပညာရှင်များ စဉ်းစားသုံးသပ်ကြပါကုန်။
ကျောင်းသားလူငယ်ဘဝက ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သုိုင်းဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရဲ့ စာသားတစ်ပုိုဒ်ကုို ပြန်သတိရပါတယ်။ “မည်ကဲ့သုို့ လုပ်လုိုက်သည်မသိ” ဟူသတဲ့။
ဩော်… ရုိုးသား အပြစ်ကင်းစင်ပြီး ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ခဲ့တဲ့ လူငယ်လေးဟာ ယခုလုို ရုိုင်းစုိုင်းကြမ်းကြုပ်တဲ့ စစ်အရာရှိတစ်ယောက်အဖြစ် မည်သူတွေက မည်ကဲ့သုို့ လုပ်လိုက်ပါလိမ့် ဆုိုတာကုို စဉ်းစားနေမိပါတယ်။
2 Responses to အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) – မည်ကဲ့သုို့ လုပ်လုိုက်သည်မသိ
Catwoman on June 9, 2014 at 4:28 pm
Htwe Paing on June 10, 2014 at 9:23 am
He doesn’t know how to respect all the farmers. Just hungry for the power and money, that’s all